I-Huawei olt MA5800-X17 Abavelisi | Kwichina China Huawei olt MA5800-X17 mveliso kunye nababoneleli
IHuawei yoqobo MA5800-X17 OLT
I-MA5800, isixhobo sokufikelela kwiinkonzo ezininzi, yi-4K / 8K / VR ekulungele i-OLT yexesha leGigaband. Isebenzisa uyilo olusasaziweyo kwaye ixhasa iPON / 10G PON / GE / 10GE kwiqonga elinye. Iinkonzo ezihlanganisiweyo ze-MA5800 zidluliswa kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo, zibonelela ngeyona vidiyo ilungileyo ye-4K / 8K / VR, isebenzise ubuchule obusekwe kwinkonzo, kwaye ixhasa ukuvela okugudileyo ukuya kwi-50G PON.
Uluhlu lwe-MA5800 emile kwisakhelo luyafumaneka kwiimodeli ezintathu: MA5800-X17, MA5800-X7, kunye MA5800-X2. Zisebenza kwiinethiwekhi ze-FTTB, FTTC, FTTD, FTTH, kunye ne-D-CCAP. I-1 yebhokisi emile okwebhokisi ye-OLT MA5801 isebenza kuyo yonke into ebonakalayo yokufikelela kwindawo yokuxinana.
I-MA5800 inokuhlangabezana neemfuno zomsebenzisi womnatha weGigaband ngokugubungela ngokubanzi, ibhendi ebanzi ekhawulezayo kunye nokunxibelelana ngobukrelekrele. Abaqhubi, i-MA5800 inokubonelela ngeenkonzo zevidiyo ze-4K / 8K / zeVR, ukuxhasa unxibelelwano olukhulu lomzimba kumakhaya ahlakaniphileyo kunye neekhampasi zonke ezinombala, kwaye inikezela ngendlela emanyanisiweyo yokuqhagamshela umsebenzisi wasekhaya, umsebenzisi weshishini, ukubuyela umva kweselfowuni, kunye ne-Intanethi yezinto ( IoT) iinkonzo. Ukuhanjiswa kweenkonzo okuhlanganisiweyo kunokunciphisa iofisi (CO) yamagumbi ezixhobo, ukwenza lula ukwakhiwa kwenethiwekhi, kunye nokunciphisa iindleko ze-O & M.
Ixabiso leHuawei Olt, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, I-Sfp C ++, Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, IHuawei Qsfp +,